EyeThupha 16, 2018 admin
Pantera Capital uphakamisa $ 71M ye fund olinga crypto
kwinkampani yabatyalimaliny Blockchain Pantera eyiNkunzi iye yasungula mali yayo crypto wesithathu phezu $71 million kaka-. An filing umzuzwana ibonisa yotyalo mali entsha, ebizwa Venture Fund III, uqale kuqala nomnikelo walo ngoJulayi 31 kwaye uye waphakamisa $71.44 million evela 90 zimali.
Pantera kwakhona wabhala kwisithuba blog ngoLwesithathu ukuba Venture Fund III sele wenza bet yayo yokuqala blockchain, imali Bakkt - iqonga cryptocurrency urhwebo sungula ekuqaleni kwale nyanga ngu ICE, inkampani engumzali i New York Stock Exchange. Pantera mali uqinile zirekhode 10,000 ekhulwini ukubuya kule minyaka mihlanu idlulileyo ukusuka izikhonkwane yayo kwiiprojekthi ezahlukeneyo cryptocurrency. Pantera utyale imali kwi utshintshiselwano crypto ezifana Bitstamp, Korbit and Shapeshift, kwakunye neentlawulo zokuqala ezifana Circle.
South Korea mali $ 880M ngenxa yobuchwepheshe kubandakanya blockchain
Kim Dong-yeon, wezeziMali South Korea kaThixo, ubhengeze ukuba urhulumente ubekele bucala $4.4 billion kule minyaka ilandelayo ukuba inkqubo yotyalo nolujolise blockchain kunye namanye amacandelo obuchwepheshe echumayo alithoba. ngokukodwa, urhulumente woMzantsi Korea uza imali phezu $880 million kunyaka ozayo ukuze kunyuswe uphuhliso lobuchwepheshe ezintsha kuquka blockchain.
Idatha zichaziwe kwi-website ye-Ofisi yoMphathiswa Economy and Finance ibonisa ukuba urhulumente kulindeleke ukuba anikeze 1 yezigidigidi won, okanye malunga $880 million ngo 2019 - i 80 nokukhula ekhulwini xa kuthelekiswa ukuba 2018 - ukuba imali kubuchwepheshe kuquka blockchain, data ezinkulu AI. Further, igunya wathi uya imali inani $8 – 9 billion kule ndawo kule minyaka mihlanu ezayo. Injongo kukuba ku “kugxila ekukhuthazeni data big and AI, ekuphuhliseni ubugcisa blockchain ukuqinisekisa ukhuseleko ulawulo lwedatha kunye ekukhuliseni uqoqosho ukwabelana.”
Cryptocurrency exchange ZB Izicwangciso hambisa Malta
ZB.com, fith ngobukhulu cryptocurrency wotshintshiselwano yehlabathi yi volume urhwebo yonke imihla, Ukubekela up ivenkile kwi libalele Blockchain Island of Malta. ZB.com uya ngokusesikweni ukumisela imisebenzi yayo aseYurophu umkhankaso i otshintshiselwano amatsha e Malta. Esi saziso entsha kulandela abo yi Binance, OKEx and DQR, abaye kwavula ofisi kwi siqithi.
Le nkampani iya ekuqaleni uqala ukuba crypto-to-crypto exchange yaye ekugqibeleni uya kukhangela ukuba banyuse eyake-to-crypto yorhwebo ngababini ngokusebenzisa platform yayo entsha esekelwe ngaphandle kwesizwe siqithi European. Co-umsunguli uJimmy Mark wathi "Malta mhlawumbi kakhulu phambili phambili-okucinga uhlanga ehlabathini apha dlt, crypto kunye fintech, kwaye banovuyo kakhulu ukuba ube yinxalenye yale Blockchain Island. Siqinisekile siya kuba nako ukwazisa imisebenzi yethu bahlala kungekudala.”